Azerbaijan: Namafisin’ny Fitsarana Avo ny fiampangàna ireo mpitoraka blaogy · Global Voices teny Malagasy
Azerbaijan: Namafisin'ny Fitsarana Avo ny fiampangàna ireo mpitoraka blaogy
Voadika ny 21 Aogositra 2010 6:24 GMT
Ity dia fampidirana avy amin'ny fanasàna natao tamin'ny blaogin'i Rebecca Vincent, Advocacy Assistant ho an'i Azerbaijan sy ny Europe Program Manager ao amin'ny ARTICLE 19. Ho fanampim-baovao bebe kokoa, mifandraisa amin'i Rebecca Vincent amin'ny: rebecca [ at ] article19 [ dot ] org
ARTICLE 19 dia manaramaso akaiky tokoa ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana Avo Azerbaijani ho fampiharana ny lalàna mikasika ny tranga -n'ireo mpitoraka blaogy Emin Milli sy Adnan Hajizade. ARTICLE 19 dia mihevitra fa i Milli sy Hajizade, izay samy nampidirina am-ponja noho ny vesatra fiampangana ho nanentana hanao hooliganism, dia nokendrena noho ireo fanehoan-kevitra mitsikera ny manampahefana Azerbaijani. ARTICLE 19 dia miantso ny governemanta Azerbaijani mba hamotsotra an'i Milli sy Hajizade hivoaka ny fonja ary hampitsahatra ny fampidirana am-ponja ireo olona maneho fanakianana.
Tamn'ny 19 Aogositra, ny Fitsarana Avo Azerbaijani dia nandinika ny raharahan'ireo mpitoraka blaogy sy tanora mafana fo voafonja Emin Milli sy Adnan Hajizade. Tao anatin'ny fanapahany, ny Fitsarana dia nanamafy ny didy navoakan'ny Fitsarana ambaratonga voalohany, izay niampanga an'i Milli sy Hajizade ho nanao resaka ‘”hooliganism” ka nanasazy azy ireo tsirairay avy roa taona sy tapany ary roa taona an-tranomaizina. Voasambotra tamin'ny 8 Folay 2009 izy roa ireo taorian'ny niantsoany polisy noho ny voina nahazo azy ireo tamin'ny fanafihana an-dry zareo tao amina trano fisakafoanana iray.
“Milli sy Hajizade dia mazava loatra fa any am-ponja noho ny fampiasàn-dry zareo ny zony hiteny malalaka“, hoy ny fanamarihan'ny Tale mpanatanteraky ny ARTICLE 19, Agnès Callamard. “ Ny famoahana didy omaly dia mampibaribary ny tsy fahaleovantenan'ny rafi-pitsarana Azerbaijani.“
Ireo mpisolo vava an-dry Milli sy Hajizade dia mikasa ny hitondra ny raharaha ho eo anatrehan'ny Fitsarana Eraopeana momba ny Zon'Olombelona [European Court of Human Rights] rehefa tsy misy intsony fampakàrana azo antenaina amin'ny eo an-toerana. Ny Masoivohon'ny OSCE ho an'ny Fahalalahan'ny Gazety ary ny Kaomisera ambonin'ny Kaonsilin'ny Eraopa momba ny Zon'Olombelona dia samy nilaza ho mandray an-tanana ny raharaha famonjàna an'i Milli sy Hajizade avokoa, nilazany fa ny hetsika dia toa fiezahan'ireo manampahefana Azerbaijani hanakombonam-bava ireo feo mitondra fanakianana.
ARTICLE 19 dia miantso ny governemanta Azerbaijani hamotsotra an'i Milli sy Hajizade ary ireo hafa voafonja amin'izao fotoana izao noho ny fanehoan-kevitra manakiana, isan'ireny ry Realniy Azerbaijan sy ny tonian-dahatsoratry ny gazety an-tsoratra Gundelik Azerbaijan, Eynulla Fatullayev ary Yeni Fikir, Ruslan Bashirli mpitarika hetsiky ny tanora . ARTICLE 19 dia mangataka hatrany amin'ny governemanta Azerbaijani hampitsahatra ny fampidirany am-ponja olona noho ny antony politika, ary hampihatra feno ny fifanarahana iraisam-pirenena nekeny momba ny fahalalahana miteny sy maneho hevitra.
Tantaran'ny Azerbaijan farany
Nanitatra ny fitondrana fanokana-toerana manokana i Azerbaijan
Manome tsiny an'i Azerbaijan noho ny fanitsakitsahana ny fampitsaharana ady i Rosia
06 Aogositra 2021Azia Afovoany sy Kaokazy
Nifampiampanga tamin'ny fifandonana vaovao i Armenia sy i Azerbaijan